ဘာကြောင့်ရေချိုးခန်းလိင်သည်ဘာကြောင့်ပူတာလဲ - Brain On Porn
ဤဆောင်းပါးတွင်ထုတ်ဖော်ပြသကဲ့သို့ပင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားစရာဘို့အရှာဖွေရေးမြင့် dopamine နဲ့တစ်ဦးပြောင်းလဲပြည်နယ်အဘို့အစွဲလမ်းရှာပုံတော်ထက်လိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့အကြောင်းကိုမကြာခဏဖြစ်ပါတယ်။ ဆွဒလိုက်စားပင်တတ်နိုင်သမျှ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာ morph. ဦးနှောက်ပလပ်စတစ်များမှာနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအံ့သြစရာလမ်းညွန်အတွက်သင်ယူမှုယူနိုင်ပါတယ်။
ဂျိမ်း Hannaham အားဖြင့်
သြဂုတ်လ 31, 2007 | အိုင်ဒါဟိုအထက်လွှတ်တော်အမတ်လာရီခရက်ခ်က“ ငါကလိင်တူချစ်သူမဟုတ်ဘူး” လို့ပြောတဲ့အခါငါသူ့ကိုယုံတယ်။ ဒါပေမယ့်သူကမင်နီယာပိုလစ်စတ်မှာရှိတဲ့ရေချိုးခန်းထဲမှာအဖမ်းခံရချိန်မှာသူဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကသူမနဲ့လိင်ဆက်ဆံတာကိုမပြုခဲ့ဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး။ မတရားသောအပြုအမူများစွဲချက်တင်မှုဖြင့်ပေါလ်လေဆိပ်။ သေချာသည်မှာသူ၏ capri ဘောင်းဘီအတွက်တန်ဖိုးရှိသည့်လိင်တူဆက်ဆံသူတိုင်းသည် Craig ၏ရုပ်မြင်သံကြားမှလိင်တူချစ်သူများမဟုတ်သည့်ကြေငြာချက်တွင်သူ၏ဇနီးရှိနေခြင်းကြောင့်ပိုမိုအားကောင်းလာသည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ Ted Haggard နှင့် Mark Foley တို့၏အရှုပ်တော်ပုံများအပြီးတွင်ထင်ထင်ရှားရှားဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်သူအချို့ပင် Craig သည်“ ကျွန်ုပ်သည်လိင်ခြားသူမဟုတ်”၊ “ ငါယောက်ျားနဲ့ဘယ်တော့မှမလိင်ဆက်ဆံဖူးဘူး”၊ ထိုအရာဟောင်းတစ် ဦး ဖြစ်သော်လည်းကောင်းသည်မှာ“ ငါလုပ်ခဲ့တာကမင်းကိုလိင်တူချစ်သူမဖြစ်စေရဘူး”၊ ဒါမှမဟုတ်“ ငါကယောက်ျားလေးတွေအတွက်သာပိုလိုတာပဲ။ ”
Haggard နှင့် Foley တို့က Craig အားပြောပြနိုင်သကဲ့သို့ရေချိုးခန်းခန်းမများသည်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ရှိနေနိုင်သည်။ သို့သော်ဗီရိုသည်ဘာသာရေး၊ ရှေးရိုးစွဲရီပတ်ဘလီကန်များနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ရန်လုံလောက်သည်။ (တကယ်တော့သူတို့ကတခြားလူတွေကိုမကြာသေးမီကမှထုတ်ပစ်နေပုံရသည်။ ) ရီပတ်ပလစ်ကန်အမျိုးသားတစ် ဦး မှရှင်းလင်းပြတ်သားသောစကားလုံးများ - သူမည်မျှပင်လိင်တူဆက်ဆံသည်ဖြစ်စေလိင်တူချစ်သူမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြရန်မှာ - အိမ်တွင်းဆောက်ခြင်းအတွက်ထာဝရဆွဲဆောင်မှုဖြစ်သည်။
အများပြည်သူသုံးရေချိုးခန်းများတွင်လိင်ဆက်ဆံရန်တောင်းဆိုခြင်းသည်ဗြိတိန်ဟူသောစကားလုံးဖြစ်သည်။ အင်္ဂလန်တွင်တင်းကုပ်တံခါးများသည်များသောအားဖြင့်ကြမ်းပြင်အထိကျယ်သည်။ - စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်များအတွက်အများဆုံးသီးသန့်ဖြစ်ခြင်း။ ငါက“ အိမ်တွင်းဆောက်ခြင်း” ဟုခေါ်ဆိုသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်အမေရိကန်နိုင်ငံ“ cruising” ဟူသောအသုံးအနှုန်းသည်တိတိကျကျဖော်ပြခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Cruising သည်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုပြုလုပ်နိုင်သည် (ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်၌မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်) နှင့်အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုမလိုအပ်ပါ။ ထိုအသုံးအနှုန်းက“ မင်းနားရွက်ကိုပိတ်ပါ” ဟူသောရုပ်ရှင်ထဲသို့ထုတ်ဝေသောဒိုင်ယာရီတွင်ရေးစပ်ခဲ့သည့်ဂျိုးအော့တ်န်ကိုသတိပေးသည်။ သူနှင့်အင်္ဂလိပ်လူသိများသောဂျော့ခ်ျမိုက်ကယ်၊ အများပြည်သူရေချိုးခန်းများတွင်လိင်ဆက်ဆံရန်တောင်းဆိုခြင်းသည်အဖြစ်အပျက်ပြီးနောက်သွေဖည်စေသောတေးဂီတဗီဒီယိုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသောလူများမှာ - Michael အားဖမ်းဆီးခြင်းမခံရမီသူပါ ၀ င်ခဲ့သည် - ပုံမှန်အားဖြင့်အကူးအပြောင်းကာလများအတွင်းထရပ်ကားမှတ်တိုင်များ၊ လေဆိပ်များနှင့်လူသွားလူလာများသည့်အခြားနေရာများတွင်ရှာဖွေခြင်းများပြုလုပ်လိမ့်မည်။ သို့သော်ဤယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်သည်ပိတ်ထားသောအမျိုးသားများသို့မဟုတ်ကက်သလစ်ဘုန်းကြီးများအတွက်သာမဟုတ်ပါ။ သို့ဆိုလျှင်သူတို့၏နေအိမ်များကဲ့သို့ပိုမိုသက်သောင့်သက်သာရှိသောနေရာများသို့ဝင်ခွင့်ရကြသောလိင်တူချစ်သူနှင့်လိင်ခြားသူများအားအဘယ်ကြောင့်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလိင်ဖျော်ဖြေမှုတစ်ခုဖြစ်သည့် Black Party ကဲ့သို့သောပွဲများကိုတက်ရောက်ရန်ရွေးချယ်ခြင်းသည်အိမ်သာကိုလှည့်စားနေသနည်း။
အမျိုးသားများက sluts ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ရဲ့ slut (နည်းပညာပိုင်းအရ "အတွင်းပိုင်း" မဟုတ်) နှုတ်ဆက်ပြီးခဲ့ကြသောလိင်တူချစ်သူယောက်ျားလေးများသည်မြင်းခွာပြိုင်ပွဲတွင်ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရာတွင်၎င်းတို့သည်ရှယ်ယာအနည်းငယ်သာရှိသည်ဟုခံစားရနိုင်သော်လည်း အတွေ့အကြုံတစ်ခုအပိုစိတ်လှုပ်ရှား add ဖမ်းမိထားကြောင်း၏လွန်ကျူးခြင်းနှင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသဘောသည်အဖြစ်မိုက်ကယ်ဝန်ခံခဲ့သည်။ တချို့ကလိင်တူယောက်ျားလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့် service ကိုဘူတာရုံရှိနေစဉ်, ဖြောင့်ယောက်ျားတွေ servicing အားဖြင့်ဖွင့်ထားပါသည်။ နှင့် သင့်ရဲ့“ တိမ်းညွတ်ချက်” ကိုအိမ်သာထဲမှာဘယ်သူမှဂရုမစိုက်ဘူး။
အများပြည်သူသုံးရေချိုးခန်းမှာတစ်ခါမှမလုပ်ဖူးသော်လည်း (မဟုတ်သည်!) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကလပ်များနှင့်လိင်အင်္ဂါအမြောက်အများကိုကျွန်တော်ရောက်ဖူးတယ်။ porno ဆိုင်များရှိဗီဒီယိုအပြောက်များသည်ရေချိုးခန်းများကိုလည်းဘေးကင်းလုံခြုံစွာအစားထိုးနိုင်သည်။ သို့သော်သင်က porno ဆိုင်တစ်ခုတွင်ဖမ်းမိပါကသင်ယိုစိမ့်နေသည်ဟုမပြောနိုင်ပါ။ သို့သော်ကိစ္စရပ်အားလုံးတွင်၊ protocol သည်အတူတူဖြစ်သည်။ လူတစ်ယောက်သည်သင်အားဘီစကွတ်များဖြင့်ဖမ်းယူနိုင်ပြီး၎င်းကိုသူအားဆက်လက်ခွင့်ပြုနိုင်သည်သို့မဟုတ်သူ၏လက်ကိုညင်ညင်သာသာဖယ်ရှားနိုင်သည်။ သင် "ဟေ့! သင်၏လက်ကိုငါ့အားယူပါလော့ဟုဆိုလျှင်၊ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတယောက်သည်နောက်အခန်းတစ်ခန်းတွင်သူနေထိုင်ခဲ့သည့်နေရာကိုအမှတ်တမဲ့အမှတ်ရစေခဲ့သည်။ ယောက်ျားသုတ်ပဝါများပတ်ပတ်လည်တွင်လမ်းလျှောက်နေသောကလပ်များတွင်“ ချယ်လ်ဆီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်း” ဟုအမည်ရသည့်အခြားမိတ်ဆွေတစ် ဦး နှင့်သင်၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုတိုင်းတာရန်သင်၏နို့သီးခေါင်းကိုညင်ညင်သာသာညှိနှိုင်းပေးမည်။
လိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားအများစုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံသဏ္ဌာန်နှစ်များကိုဗီရိုထဲတွင်သုံးလေ့ရှိကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထွက်လာသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ဗီတာမင်ဒီ၏နှစ်သက်ဖွယ်ရာများရှိသည်ဟုငြင်းဆိုလေ့ရှိသည်။ လျှို့ဝှက်ခြင်း၊ နှစ်ဆသောလျှို့ဝှက်ချက်ရှိခြင်းသည်ဘဝအားဖြင့်သင့်ကိုအရေးကြီးသောအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်၊ ဘဝကိုပြဇာတ်အဖြစ်၊ သင်ကနယူးဂျာစီပြည်နယ်၏ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသည့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်တွေ့ရပါကပျော်ရွှင်မှုခံစားရလိမ့်မည်။ သင်သည်နက်နီးယားနက်သို့ရောက်နေသောဗီရိုထဲ၌နက်ရှိုင်းစွာဝင်သွားသကဲ့သို့လိင်သည်အခြားကမ္ဘာလောက၊ ဤအကြောင်းကြောင့်အချို့သောပွင့်လင်းသောလိင်တူချစ်သူအမျိုးသားများသည်လိင်နှင့် / သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်း၊ ၀ တ်စုံစက်ဝိုင်းများ၊ အ ၀ တ်အထည်များ ၀ တ်ဆင်ခြင်း၊
ဒါပေမယ့်အစပိုင်းမှာတော့ US မှာရှိတဲ့ queer goslings ဟာလိင်တူချစ်သူကမ္ဘာကိုရှာဖို့မလွယ်ကူဘူး။ (အခြားနိုင်ငံအချို့တွင်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ဟော်လန်ရှိဂေးဘားများသည်ပြင်ပကဖေးများမည်မျှရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်အံ့သြမိသည်။ ဘယ်တုန်းကမှဂေးဘဝသည်၎င်း၏မျက်နှာစာကို ဖြတ်၍ စာလုံးကြီးများဖြင့်အော်ဟစ်သည်။ အလယ်အမေရိကရှိဂေးဘားများသည် အရောင်ပြောင်းသောပြတင်းပေါက်များနှင့်အမှတ်အသားပြုထားသည့်စတိုးအသွင်အပြင်တွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ) အခြားလိင်တူချစ်သူအမေရိကန်များကိုသင်ကြားရန်ပထမဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာဖြောင့်သူများသည်လိင်တူဆက်ဆံသူများအားရှုတ်ချသည့်အခါအနီးကပ်နားထောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆွေမျိုးတစ် ဦး က“ ပန်းခြံထဲတွင်လုပ်နေသည့် fagots” နှင့်ပတ်သက်ပြီးမကျေနပ်လျှင်“ Fagots? တကယ်လား ကျွန်တော်တစ်ခါမှမကြားဖူးဘူး ဘယ်ပန်းခြံ? လမ်းဆုံလမ်းခွတွေကဘာတွေလဲ။ " ၎င်းနောက်ညဥ့်နက်ပိုင်းတွင်သင်ထိုနေရာ၌သွားပြီးသင်၌အသိုင်းအဝိုင်းအချို့ရှိသည်ဟုသင်ခံစားရသည်။ သင်၏ပြည်နယ်မှအထက်လွှတ်တော်အမတ်တစ် ဦး ကအရှုပ်တော်ပုံတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ပါကသူသည်သင်၏အမျိုးအစားမဟုတ်သော်လည်းသူ၏အမဲလိုက်ရန်နေရာများကိုရှာဖွေရန်အင်တာနက်ကိုရှာဖွေလိမ့်မည်။
တင်းကုပ်၌ထိုင်နေစဉ်သင်၏ခြေထောက်အားနှိပ်ခြင်းကအခြားသင်္ဘောသားများအကြောင်းသင်သိသောအခြားသင်္ဘောသားများအားအသိပေးခြင်းသည်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းလေ့လာသူများကလျင်မြန်စွာသိလိုက်ကြသည်။ ဒါကအထက်လွှတ်တော်အမတ် Craig ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အရာရှိကိုသတိပေးလိုက်တာပဲ။ ခြေထောက်အသာပုတ်တာကသာမန်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်ဘုံအသိပညာဖြစ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ဖြောင့်မတ်တဲ့အမျိုးသားတွေကသူတို့ခြေထောက်တွေကိုတင်းတင်းတင်းတင်းမှာထားဖို့ကြိုးစားလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ပါ။
သို့သော်များစွာသောယောက်ျားများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်ပေးသောအရာသည်ရိုးရိုးလေးရင်းနှီးသောနေရာမရှိဘဲလွယ်ကူသောသားကောင်ဖြစ်ရန်အလားအလာရှိသောကြောင့်အိမ်ဆောက်ခြင်း၏ရွှင်လန်းမှုအတွက်ရှင်းလင်းချက်များပင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းခံရပုံရသည်။ လိင်တူချစ်သူအမျိုးသားများကိုဖြောင့်မတ်သောအမျိုးသားများအားမနာလိုသည့်အရာတစ်ခုရှိသည်ဆိုပါကဖက်ရှင်ကျသည့်ပုံစံ မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုရန်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုတားဆီးသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိသည်၊ ညတွင်နောက်ဆုံးဖုန်းခေါ်ခြင်းဖြင့်ကံကောင်းခြင်းမရှိသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည် လိင်ကလပ်၊ ရပ်ကွက်နောက်ခန်းပါသည့်ဘား၊ ပန်းခြံတစ်ခုသို့မဟုတ်အများပြည်သူသုံးရေချိုးခန်းများ၌ရပ်ပါ။ များသောအားဖြင့် ၀ င်ခွင့် မှလွဲ၍ အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်မင်းက slut တစ်ယောက်၊ မင်းလိုချင်တာအားလုံးဟာသင့်ငပဲပေါ်ကပါးစပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲဒီအပေါက်က ၀ တ်ဆင်ထားသည့်နှုတ်ခမ်းနီ၊ ဆိတ်သားတစ် ဦး သို့မဟုတ်နှစ် ဦး စလုံးသည်သင့်အတွက်အရေးမကြီးပေ။
ဒါဟာလိင်တူဆက်ဆံပြုမူရီစရာဖြစ်သောလိင်တူဆက်ဆံသူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း, အတူပြောရလျှင်ဖြစ်ကြောင်းယူဆကတည်းကဗီရိုလိင်တူချစ်သူအမျိုးသားတွေရေချိုးခန်းလိင်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်တစ်ခုတည်းသောသူတွေကိုဖြစ်ကြောင်းစိတ်ကူးယဉ်, နုံဖြစ်ပါတယ်။ (သမိုင်းပညာရှင် BR Burg ကာရစ်ဘီယံ၏ 17th ရာစုခဲ့ကြတယ်စေ့စပ်ကြောင်းစောဒကတက်ထားပါတယ်အကျဉ်းထောင်, ဗိုလ်မြင့်မားသမုဒ်, ကျေးရွာပြည်သူ့, etc: တစ်ခုမှာခဲလိင်တူဆက်ဆံတဲ့အပြုအမူမြှင့်တင်ရေးတို့အတွက်တစ်ဦးဂုဏ်သတင်းနှင့်အတူအများအပြား Hyper-ပုလ် settings ကိုသတိရရန်လိုအပ်ပါသည် သီးသန့်လိင်တူဆက်ဆံတဲ့အပြုအမူအတွက်။ , ဂျော်နီ Depp ကြောင်းကိုယူ!)
“ ကုန်သွယ်ရေး” ဟုလူသိများသောရှေးခေတ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုရှိသည်။ ယောက်ျားနှစ် ဦး အပြန်အလှန်လဲလှယ်ကြသည်။ အနည်းဆုံးတစ် ဦး မှာလိင်ကွဲလိင်ကွဲဆန်ဆန်လိင်တူချင်းဆက်ဆံသူဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ထိုးနှက်ချက်ကိုလက်ခံရရှိသူသို့မဟုတ်စအိုမှလိင်ဆိုင်ရာတက်ကြွစွာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သည်သူ၏ hanky-panky နှင့်ဝေးကွာသွားနိုင်သည် ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်ငြင်းအတူ။ တစ်နည်းဆိုရသော်သူသည်မိမိကိုယ်ကို“ လိင်တူချစ်သူမဟုတ်” ဟူသောယုံကြည်ချက်ဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုနှစ်သိမ့်ပေးနိုင်သည်။ အကြောင်းပြချက်အချို့ကြောင့် (misogyny, ဆိုပါစို့) အမျိုးသားအများစုသည်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခံရသူသည်“ မိန်းမ” သို့မဟုတ်မိန်းမကဲ့သို့ဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်ကြသည်။
ဘယ်အထက်လွှတ်တော်အမတ် Craig ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ဆောင်တတ်၏။ အိုင်ဒါဟိုပြည်နယ်မှူးသည် ၁၉၆၇ ခုနှစ်မှစ၍ လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုလက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်ညွှန်ပြသောအဖြစ်အပျက်များစွာကိုစာရင်းပြုစုထားသော်လည်းသူသည်တစိတ်တပိုင်းအပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပြီးသုံးပတ်အကြာတွင်“ ရောဂါပျောက်ကင်းသွားပြီ” ဟုအခိုင်အမာဝန်ခံခဲ့ပြီး Ted Haggard နှင့်မတူသည် ဒါခေါ် reparative ကုထုံး၏။ ဒီလေဆိပ်ရေချိုးခန်းထဲမှာဘယ်သူ့ကိုရပ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုတာဘယ်သူ့ကိုမှလုပ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျနော်တို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဂရပ်ဖစ်အစီရင်ခံစာမရနိုင်ရင်ဆီနိတ်တာကသူဟာလိင်တူချစ်သူမဟုတ်တော့ဘူး၊ ဘယ်တော့မှလိင်တူချစ်သူမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတာကိုလွတ်လပ်စွာယုံကြည်တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်အထိငါတို့ခြေထောက်တွေကိုအသာပုတ်ပါလိမ့်မယ်။
[မူရင်းဆောင်းပါး၌ထငျရှား အလှပြင်ဆိုင် အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်း]